हेपाटाइटिस के हो ? यो के कारणले हुन्छ र यसबाट कसरी जोगिने ?
हेपा अर्थात् कलेजो र टाइटिस अर्थात संक्रमण । हेपाटाइटिस भन्नाले विभिन्न संक्रमणका कारणले कलेजो सुन्निने अवस्था बुझिन्छ । कलेजोमा ‘हेपाट्रोपिक भाइरस’का कारणले हुने संक्रमणलाई भाइरल हेपाटाइटिस भनिन्छ । हेपाटाइटिस ‘ए’ देखि ‘इ’ सम्म जम्मा पाँच प्रकारका हुन्छन् । हेपाटाइटिस बी र सी अरुभन्दा घातक हुन्छन् ।
नेपालको कूल जनसंख्याको करिब ०.९ प्रतिशत अर्थात जम्मा ४ लाख मानिसमा हेपाटाइटिस बी र सी लागेको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै संसारमा वार्षिक १३ लाख मानिसको हेपाटाइटिसको कारण मृत्यु हुने गरेको एक अध्ययन देखाएको छ ।
यसले के गर्दछ ?
हेपाटाइटिस बी र हेपाटाइटिस सीले कलेजोमा गम्भीर किसिमको क्षति गराएर कलेजोको क्यान्सर गराउँदछ । र, मानिसको अकालमा मृत्यु गराउँदछ । कलेजोको क्यान्सर गराउने कारणमध्ये आधाभन्दा बढी हेपाटाइटिस बी र सीले गराउने गर्दछ ।
विश्वमा क्यान्सरबाट मृत्यु १२ जनामध्ये १ जना कलेजोको क्यान्सरबाट मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ । आश्चर्य कुरा के छ भने हेपाटाइटिस लागेको मानिसलाई यससम्बन्धी जानकारी नै नभएको पाइन्छ र उनीहरुले उनीहरुसँग संगत गर्ने आफन्त र साथिभाइलाई पनि संक्रमित बनाइरहेका हुन्छन् । हेपाटाइटिस बी आमाबाट बच्चाहरुमा सर्ने उच्च जोखिम रहन्छ । जसमा ८० देखि ९० प्रतिशत बच्चहरुमा हेपाटाइटिस बी दीर्घरुपमा देखिन्छ । जसमध्ये एक चौथाई यूवाअवस्थामा नै मर्न बाध्य हुन्छन् ।
हेपाटाइटिस बी र सी सर्ने कारण तथा बच्ने उपाय :
संक्रमित आमाबाट यो रोग बच्चामा सजिलै सर्नसक्ने भएकाले गर्भवती भएको बेलामा हेपाटाइटिस बी र सीको परीक्षण गर्ने ।
आइ भी ड्रग्स युजर्सहरुमा यो रोग सर्ने जोखिम बढी रहन्छ । त्यसैले एक आपसमा सिरिन्ज शेयर नगर्ने ।
रक्त सञ्चारको क्रममा सावधानी अपनाउने र हेपाटाइटिस बी र सीको परीक्षण गरेर मात्र रक्तदान गर्ने ।
मेडिकल उपकरण तथा औजारहरुलाई निर्मलीकरण नगरी उपचार तथा अन्य मेडिकल प्रक्रिया नगर्ने ।
असुरक्षित यौनसम्पर्क राख्दा यो रोग सर्ने सम्भावना बढी हुुन्छ । त्यसैले असुरक्षित यौनसम्पर्क राख्दा कण्डमको प्रयोग गर्ने । (हेपाटाइटिस बी मा यो बढी हुन्छ )
ट्याटु खोप्दा प्रयोग हुने उपकरण तथा औजारहरुलाई निर्मलीकरण गरेर मात्र प्रयोग गर्ने । नत्र हेपाटाइटिस सी सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
व्यक्तिगत सरसफाइमा प्रयोग हुने औजार तथा उपकरणहरु जस्तै टुथब्रस, रेजर आदि शेयर नगर्ने ।
हेपाटाइटिसविरुद्धको खोप लगाएर सुरक्षित हुने ।